ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နှစ်ဖက်ခုံး ရုပ်ထင်မှန်သား |
၂၁ ရက်အထိ ပါဝါအသုံးခံနိုင်သည့် ဘက်ထရီ |
အလျှင်အမြန် အားသွင်းနိုင်သော VOOC Flash Charging |
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအား မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ပေးခြင်း
အရောင်အသွေးစိုပြေပြီး လှပတောက်ပြောင်သည့် ရုပ်ထင်မှန်သား
ဒဏ္ဍာရီသူရဲကောင်းပုံစံ ရုပ်လုံးကြွသည့် မျက်နှာပြင်ဒီဇိုင်းများကို အကောင်းစားဖုန်းများတွင်သာတွေ့ရနိုင်သည် မဟုတ်ပါ။ OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်သောအခုံးနှစ်ဖက်ပါသည့် AMOLED screen ၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော ရုပ်ပုံအရည်အသွေး၊ ခေတ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီသော အရောင်အသွေးတို့ဖြင့် ရင်သက်ရှုမောဖွယ်ဖြစ်အောင် ထုတ်လုပ်ထားရှိပါသည်။ 3D အခုံးနောက်ခံဒီဇိုင်းက လက်ပတ်နာရီကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ လှပနေအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် နောက်ခံဒီဇိုင်းကို သင့်စိတ်ကြိုက်ရုပ်ပုံများအား ပြောင်းလဲထည့်သွင်း အလှဆင်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပုံစံပြောင်းလဲပေးနိုင်သော နှစ်ဖက်ခုံး ရုပ်ထင်မှန်သား
မှတ်ချက် : စာတိုအားပြန်လည် ဖြေကြားနိုင်မှုကို Android ဖုန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော OPPO လက်ပတ်နာရီတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi ဗားရှင်း) တွင် 1.91 လက်မရှိသော ပြောင်းရွေ့နိုင်သည့် AMOLED နှစ်ဖက်ခုံး မျက်နှာပြင်ပါရှိပါသည်။ OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) တွင် 1.6 လက်မရှိသော ပုံစံပြောင်းလဲ၍ မရနိုင်သော AMOLED နှစ်ဖက်ခုံး မျက်နှာပြင်ပါရှိပါသည်။
အဖိုးတန် အချိန်များ ပိုမိုရရှိစေနိုင်မည်
အချိန်ကုန်သက်သာစေမည့် Wear OS by Google™ က ကျန်းမာရေး၊ လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ ရာသီဥတုနှင့် နေ့ရက်၊ အချိန် စသည့် အချက်အလက်များကို စမတ်နည်းပညာသုံး သတင်းအချက်အလက် စီမံမှုအသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အချိန်များ ရွေ့လျားကုန်ဆုံးသွားသည်ဟု မခံစားမိစေဘဲ အချိန်နှင့်အမျှ အကျိုးရှိရှိ လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်မှုကို သင်ကိုယ်တိုင် ခံစားမိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
၂၁ ရက်အထိ ပါဝါအား တာရှည်ခံနိုင်သည့် ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီကို ကြာရှည်ခံနိုင်ဆုံးဖြစ်အောင် OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပါဝါအားနှစ်ဆပိုခံသည့် two endurance modes ကို အသုံးပြုထားသည် - Qualcomm® Snapdragon Wear™ 3100 နှင့် Ambiq Micro's Apollo3 Wireless SoC တို့ပေါင်းစပ် အားဖြည့်ပေးခြင်း၊ ရုံးတက်ရုံးဆင်းအချိန်များတွင်ဖြစ်စေ၊ အားလပ်ရက်များတွင်ဖြစ်စေ အနားမှ ခွဲခွာသွားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် အလျှင်အမြန်အားသွင်းနိုင်သော VOOC Flash Charging ပါဝင်ပြီး ၁၅ မိနစ်အားသွင်းရုံဖြင့် တနေကုန်လုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃၆ နာရီ အထိ
၂၁ ရက် အထိ
ဘက်ထရီကုန် သက်သာစေသည့် Power Saver Mode '
၄၆% ရရှိအောင် အားသွင်းနိုင်ခြင်း
1. မှတ်ချက် OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi) ၏ အသုံးပြုပုံနှင့် အားသွင်းသည့် အချိန်ကို အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm (Wi-Fi) ၏ ဘက်ထရီ သက်တမ်းမှာ စမတ် mode တွင် နာရီ ၂၄ ကြာနှင့် ပါဝါစားသက်သာစေသည့် Power saver mode တွင် ၁၄ ရက်ကြာ အသုံးခံပါသည်။
2. လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး၏ တနေ့တာအသုံးပြုသော ယျေဘူယျအချိန်ဖြစ်သည့် ၁၆ နာရီကို စံသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
OPPO လက်ပတ်နာရီတွင် ပါဝင်သော Google Fit သည် သင်၏ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ခြေရာခံစောင့်ကြည့်ပေးခြင်းဖြင့် သင်၏ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ၅ မိနစ်စာ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း စီရီးနှင့် နေ့စဉ်ဘဝလုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွင်း အထိုင်များခြင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းများ မဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ မတ်တပ်ရပ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများဆောင်ရွက်ရန် အချိန်နှင့်တပြေးညီ ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းတို့ကိုပါ ထည့်သွင်းပေးထားပါသည်။
မှတ်ချက် : OPPO လက်ပတ်နာရီ 46mm (Wi-Fi ဗားရှင်း) 5ATM ရေစိုဒဏ်ကာကွယ်မှုစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပြီး OPPO လက်ပတ်နာရီ 41mm တွင် 3ATM ရေစိုဒဏ်ကာကွယ်မှုစနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
နာရီဝန်းကျင်အနီး လှုပ်ရှားလျက်ရှိသော နှလုံးသွေးခုန်နှုန်းကို သိရှိနိုင်ဖို့ အထူးအားစိုက်ရန် မလိုအပ်တော့ပါ။ OPPO လက်ပတ်နာရီ၏ အနောက်ဖက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော အလင်းဖြင့်လှုပ်ရှားမှုအား အာရုံခံနိုင်သော အာရုံခံဆမ်ဆာက ရင်ခုန်သံစည်းချက်များကို မလွတ်တမ်း အာရုံခံပေးနိုင်ပါသည်။ နှလုံး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို အနီးကပ်လေ့လာစောင့်ကြည့်ပြီး ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အစီခံချက်များ အမြဲမပြတ်ရရှိနိုင်ရန်အတွက် HeyTap ကျန်းမာရေး app က အကူအညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးခုန်သံအား ၂၄ နာရီ